Inona no Mahatonga ny Fifamaliana?
Mifohaza! | Desambra 2015
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Bengali Bichlamar Boligara Cebuano Chichewa Chitonga Chitumbuka Cinghalais Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Goujrati Grika Géorgien Hebreo Hiligaynon Hindi Holandey Hongroà Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Kannada Kantôney Nentim-paharazana Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Koreanina Kroaty Letonianina Lingala Litoanianina Luvale Malagasy Malayalam Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Marathe Masedonianina Myama Norvezianina Népali Ourdou Pendjabi Poloney Portogey (Brezila) Quechua (Cuzco) Romanianina Rosianina Samoanina Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Swahili (Congo) Tagalog Tahisianina Tailandey Tamoul Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tok Pisin Tseky Tsonga Twi Télougou Vietnamianina Xhosa Yorobà Zoloa Éwé
MATOAN-DAHATSORATRA | AHOANA NO HAMPILAMINA NY TOKANTRANO?
HOY i Sarah, * any Ghana, izay efa nanambady an’i Jacob nandritra ny 17 taona: “Ny vola matetika no mampiady anay. Tezitra aho satria miezaka be aho mikarakara ny tokantranonay, nefa tsy resahin’i Jacob amiko mihitsy ny fandehan’ny volanay. Herinandro maromaro izahay tsy mifampiteny.”
Hoy i Jacob: “Misy fotoana tokoa izahay mifanao teny mandratra, satria tsy mifankahazo resaka na tsy mifampiresaka tsara. Lasa mifamaly koa izahay rehefa samy entim-po.”
Mipetraka any Inde i Nathan, ary nanambady vao haingana. Nivazavaza tamin’ny rafozambaviny ny rafozandahiny indray mandeha. Hoy i Nathan: “Tezitra be ilay rafozambaviko dia lasa nandeha. Rehefa nanontaniako ilay rafozandahiko hoe naninona izy no nivazavaza, dia izaho indray no nolazainy fa namingavinga azy. Nivazavaza taminay rehetra izy avy eo.”
Efa tsapanao koa angamba fa mety hampifamaly ny resaka rehefa tsy mety ny fotoana na ny fomba ilazana azy. Mety hilamina tsara ilay izy amin’ny voalohany fa avy eo lasa ady. Tsy vitan’ny olombelona tsy lavorary ny hoe hilaza zavatra mety foana. Mety ho mora diso fandray ny zavatra lazain’ny hafa àry ianao na hitsaratsara ny antony anaovany zavatra. Afaka ny hanana fiainana milamina ihany anefa ny fianakavianao.
Inona no azonao atao rehefa raikitra ny fifamaliana? Inona no azonao atao mba hampilamina indray ny tokantranonao? Inona no nataon’ny fianakaviana maro mba hifankatia foana ny mpianakaviny? Vakio indray ny tohiny.
MATOAN-DAHATSORATRA Inona no Mahatonga ny Fifamaliana?
MATOAN-DAHATSORATRA Inona no Hanampy Anareo Tsy Hifamaly Intsony?
MATOAN-DAHATSORATRA Ahoana no Hampilamina ny Tokantrano?
HO AN’NY FIANAKAVIANA Ahoana Raha Samy Hafa Be Izahay?
Ireny fa Tonga ny Trozona!
FANTARO IZAY LAZAIN’NY BAIBOLY Ny Maty
TOPY MASO ERAN-TANY Maresaka Momba An’i Eoropa
Fanondroana ny Foto-kevitra Tamin’ny Mifohaza! 2015
NISY NAMORONA VE? Ny Fahaizan’ny Vatana Manasitrana Fery
Ny Tanany no Tena Miasa
Soratra Fandikana boky MIFOHAZA! Ahoana no Hampilamina ny Tokantrano?
Raki-peo Fandikana raki-peo MIFOHAZA! Ahoana no Hampilamina ny Tokantrano?
Ahoana no Hampilamina ny Tokantrano?
MIFOHAZA! Ahoana no Hampilamina ny Tokantrano?